ဇိမ်ခံကားအစီး(၂၀)ကိုသုံးပြီး ပရိုပို့စ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့် မထင်မှတ်တဲ့တုန့်ပြန်မှု ရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသား(ရုပ်သံ) - Thadin
HomeNEWSဇိမ်ခံကားအစီး(၂၀)ကိုသုံးပြီး ပရိုပို့စ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့် မထင်မှတ်တဲ့တုန့်ပြန်မှု ရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသား(ရုပ်သံ)
ဇိမ်ခံကားအစီး(၂၀)ကိုသုံးပြီး ပရိုပို့စ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့် မထင်မှတ်တဲ့တုန့်ပြန်မှု ရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသား(ရုပ်သံ)
February 11, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on ဇိမ်ခံကားအစီး(၂၀)ကိုသုံးပြီး ပရိုပို့စ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့် မထင်မှတ်တဲ့တုန့်ပြန်မှု ရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသား(ရုပ်သံ)
အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ သူ တိတ်တိတ်လေး ကြိတ်ပြီးချစ်ရတဲ့ ငယ်ချစ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို Surprise လည်းလုပ်ရင်း၊ ပရိုပို့စ်လည်း လုပ်ဖို့ ကြံစည်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ တကယ်ဇိမ်ခံကား အစီး(၂၀)ကို အကုန်အကျခံ ငှားရမ်းပြီး ချစ်သူအမျိုးသမီး အလုပ်လုပ်တဲ့ဆီကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်သွားခဲ့တာပါ…
ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံ၊ Shenzen မှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ သူ တိတ်တခိုး ချစ်ခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီးကတော့ Peng Yang ဖြစ်ပြီး အသက်(၂၇)နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ တရုတ်နိုင်ငံက ရုပ်သံ ချန်နယ်တစ်ခုမှာ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်း အမျိုးသားက ဒီလို ပရိုပို့စ် လုပ်လိမ့်မယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး…
ဒါကြောင့် တကယ့်တန်ဖိုးကြီးကား အစီး(၂၀)ခြံရံပြီး ပရိုပို့စ် လုပ်ခံရတာမို့ မိန်းကလေးပီပီ ဂုဏ်ယူ ဝင့်ကြွားခဲ့ပေမယ့်၊ နောက်ပိုင်းမှာ ငိုကျွေးပြီး အမျိုးသားရဲ့အချစ်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ပရိုပို့စ်လုပ်တဲ့ အမျိုးသားကို သူမက အစ်ကို တစ်ယောက်လုို သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်လိုသာ ခင်မင်တာပါတဲ့။ အမျိုးသားခမျာ Peng ရဲ့ ရုံးခန်း အပြင်ဘက်မှာ ဒူးထောက်ရင်းသာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်…
တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့လည်း တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ချစ်ခင် နှစ်သက်လို့ အခုလို ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန် လက်ထပ်ခွင့် တောင်းမယ်ဆိုရင် သင့်ဘက်က သတိထားသင့်တဲ့ အချက်ကလေး တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သင် လက်ထပ်ခွင့်တောင်းမယ့်၊ သို့မဟုတ် ချစ်ခွင့်ပန်မယ့်သူက သင့်ကိုလည်း တကယ်နှစ်နှစ်ကာကာ ပြန် ချစ်နိုင် မချစ်နိုင် ဆိုတာကိုလည်း ကိုယ့် အသိစိတ်နဲ့ သေချာနေဖို့ လိုပါတယ်…
CRD-နတ်စည်တော် (MyanmarNote),source : elitereaders.com
ဇိမျခံကားအစီး(၂၀)ကိုသုံးပွီး ပရိုပို့ဈလုပျခဲ့ပမေယျ့ မထငျမှတျတဲ့တုနျ့ပွနျမှု ရရှိခဲ့တဲ့အမြိုးသား(ရုပျသံ)
အမြိုးသားတဈယောကျဟာ သူ တိတျတိတျလေး ကွိတျပွီးခဈြရတဲ့ ငယျခဈြ အမြိုးသမီးတဈယောကျကို Surprise လညျးလုပျရငျး၊ ပရိုပို့ဈလညျး လုပျဖို့ ကွံစညျခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ တကယျဇိမျခံကား အစီး(၂၀)ကို အကုနျအကခြံ ငှားရမျးပွီး ခဈြသူအမြိုးသမီး အလုပျလုပျတဲ့ဆီကို ဆိုကျဆိုကျမွိုကျမွိုကျသှားခဲ့တာပါ…
ဒီအဖွဈအပကျြဟာ တရုတျနိုငျငံ၊ Shenzen မှာ ဖွဈခဲ့တာပါ။ သူ တိတျတခိုး ခဈြခဲ့ရတဲ့ အမြိုးသမီးကတော့ Peng Yang ဖွဈပွီး အသကျ(၂၇)နှဈ ဖွဈပါတယျ။ သူမဟာ တရုတျနိုငျငံက ရုပျသံ ခနျြနယျတဈခုမှာ အစီအစဉျ တငျဆကျသူအဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျနသေူ တဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ ငယျသူငယျခငျြး အမြိုးသားက ဒီလို ပရိုပို့ဈ လုပျလိမျ့မယျလို့ ဘယျတုနျးကမှ မမြှျောလငျ့ခဲ့ပါဘူး…
ဒါကွောငျ့ တကယျ့တနျဖိုးကွီးကား အစီး(၂၀)ခွံရံပွီး ပရိုပို့ဈ လုပျခံရတာမို့ မိနျးကလေးပီပီ ဂုဏျယူ ဝငျ့ကွှားခဲ့ပမေယျ့၊ နောကျပိုငျးမှာ ငိုကြှေးပွီး အမြိုးသားရဲ့အခဈြကို ငွငျးပယျခဲ့ပါတယျ။ အကွောငျးကတော့ ပရိုပို့ဈလုပျတဲ့ အမြိုးသားကို သူမက အဈကို တဈယောကျလို သူငယျခငျြး တဈယောကျလိုသာ ခငျမငျတာပါတဲ့။ အမြိုးသားခမြာ Peng ရဲ့ ရုံးခနျး အပွငျဘကျမှာ ဒူးထောကျရငျးသာ ကနျြရဈခဲ့ပါတော့တယျ…
တကယျလို့ သငျ့အနနေဲ့လညျး တဈစုံတဈယောကျကို ခဈြခငျ နှဈသကျလို့ အခုလို ရုပျရှငျဆနျဆနျ လကျထပျခှငျ့ တောငျးမယျဆိုရငျ သငျ့ဘကျက သတိထားသငျ့တဲ့ အခကျြကလေး တဈခုတော့ ရှိပါတယျ။ အဲဒါကတော့ သငျ လကျထပျခှငျ့တောငျးမယျ့၊ သို့မဟုတျ ခဈြခှငျ့ပနျမယျ့သူက သငျ့ကိုလညျး တကယျနှဈနှဈကာကာ ပွနျ ခဈြနိုငျ မခဈြနိုငျ ဆိုတာကိုလညျး ကိုယျ့ အသိစိတျနဲ့ သခြောနဖေို့ လိုပါတယျ…
CRD-နတျစညျတျော (MyanmarNote),source : elitereaders.com
လက်တလော လူကြိုက်များနေတဲ့ အသစ်​ထွက်​ရှိလာတဲ့ ဟိန်းမင်းသူနဲ့ အ​မေရိကန်​အဆို​တော်​ Wendell Ray တို့ရဲ့ သီချင်းဗီဒီယို​…!
တစ်ညနဲ့ တစ်မနက် ၂ ခွက်သောက်ရုံ ရှိသေးတယ် ကျောက်ကျလာတဲ့ လက်တွေ့ဆေး…!
This Month : 33796
This Year : 175253
Total Users : 534277
Total views : 2416977